Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare oo ciidamada AMISOM maanta ay ka hor istaageen Garoonka Diyaaradaha. – Hornafrik Media Network
Hornafrik-Guddoomiyaha Golaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdulaahi iyo xubno la socday oo sogootinayay xili maanta uu ka dhoofayay Muqdisho ayaa ciidamada AMISOM waxay ku xayireen afaafka hore ee laga galo Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Guddoomiye Cabdi Xaashi oo maanta u duulayay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa ciidamada AMISOM waxay ku celiyeen aga gaarka Garoonka gaar ahaan dhanka Marina Gate ee mas`uuliyiinta dowlada ay ka galaan Garoonka.
Muran dheer kadib Saraakiisha Ciidamada Booliiska ayaa arinta soo dhax galay waxaana ugu dambeyn la fasay Guddoomiyaha si uu ugu duulo magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Ciidamada AMISOM ayaa sheegay inay ogolaansho u heysataan kaliya Kolonyada Madaxweynaha, Ra’iisul Wasaaraha iyo Guddoomiyaha Golaha Shacabka inay geli karaan garoonka, iyagoo aan la baarin, maadaama amnigooda ay qeyb ka yihiin Ciidamo AMISOM.
Majiraan faafaahin intaas dhaafsiisan oo soo baxaya oo ku aadan arintaani, waxaana la filayaa in saraakiisha ciidamada AMISOM ay si faafaahsan ugu hadlaan arintaan maalmaha soo socda.
Qarax Gaari oo maanta ka dhacay Magaalada Muqdisho.